Gbasara Ọmụmụ Ihe Ndịàmà Jehova
Ị ga-anọ ebe a mata gbasara ọmụmụ ihe anyị. I nwekwara ike ịnọ ebe a mata nke dị gị nso i nwere ike ịga.
Ihe Banyere Koronavaịrọs: N'ọtụtụ ebe ugbu a, anyị anaghịzi anọ n'Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị ma ọ bụ n'ìgwè amụ Baịbụl. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe Baịbụl na-ekwu ma ọ bụ gbasara Ndịàmà Jehova, biko dejupụta fọm dị na Gwa Anyị Ka Anyị na Gị Mụwa Baịbụl, ka Onyeàmà Jehova nọ n'ógbè gị nwee ike ịkpọtụrụ gị.
Chọta nke Dị Gị Nso
Olee Otú Ọmụmụ Ihe Anyị Na-adị?
Ndịàmà Jehova na-enwe ọmụmụ ihe ha ugboro abụọ n’izu. (Ndị Hibru 10:24, 25) N’ọmụmụ ihe ndị a, anyị na-amụ Baịbụl, na-amụkwa otú anyị ga-esi na-eme ihe Baịbụl kwuru. Ndị na-abụghị Ndịàmà Jehova nwekwara ike ịbịa ha.
Ọmụmụ ihe anyị na-abụkarị ajụjụ na azịza otú ahụ ụmụ akwụkwọ si amụ ihe. Onye ọ bụla nwekwara ike iweli aka zaa ajụjụ. Tupu anyị amalite ọmụmụ ihe anyị, anyị na-abụ abụ ma kpee ekpere. Anyị na-abụkwa abụ ma kpee ekpere tupu anyị emechie.
Ọ bụghị naanị Ndịàmà Jehova na-abịa ọmụmụ ihe anyị. Onye ọ bụla nwere ike ịbịa ya. A naghị asị ndị mmadụ kwụọ ụgwọ oche, a naghịkwa ebugharị efere onyinye.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọmụmụ Ihe Anyị